Pack Creek ~ Creekside East, Economy + Comfort at the Ranch. Ikhabethe osebeni lwePack Creek. I-Rustic Stone Porch w/Ukubukwa Okuhle. - I-Airbnb
Pack Creek ~ Creekside East, Economy + Comfort at the Ranch. Ikhabethe osebeni lwePack Creek. I-Rustic Stone Porch w/Ukubukwa Okuhle.
Esanda kulungiswa ngo-2016, i-Creekside manje inomoya ophakathi nendawo nokushisa, amakhishi alungiswe kabusha, i-flooring entsha, imibhede emisha, nokuningi. Uzothola izintengo ezinhle ozilindele e-Creekside, nezinto eziningi zesimanje eziwusizo nezibuyekezo ezifakiwe manje. I-Creekside East ne-West zingamakhabethe axhumene akunikeza okuhlangenwe nakho okugcwele kwe-Pack Creek Ranch ngokomnotho nokunethezeka. Indlu ngayinye ingalala abantu abayisithupha. Ibekwe endaweni eyindlu engaphansi osebeni lwe-Pack Creek, izihlahla ze-oki eziluhlaza kanye nempilo yezinyoni ehlala emfudlaneni kungaphandle kwendlu yokugezela kanye namafasitela asekhishini. Umpheme ongaphambili obekwe phansi ngamatshe uhlinzeka ngemibono emihle yezintaba zase-La Sal kanye nokushona kwelanga phezu konqenqema lwetshe elibomvu. I-Ranch inikeza ichibi lokubhukuda langaphandle lesizini (ngokuvamile livula usuku lweSikhumbuzo kuze kube uSepthemba. kodwa lingashintsha), kanye nebhavu elishisayo nesauna unyaka wonke. Izilwane zasendle zigcwele futhi kunemizila eminingi eseduze.
Zitholele indawo yokuhlala kalula eCreekside East. Igumbi lokulala elikhulu linemibhede yezindlovukazi emi-2 ethokomele kanye nesitoreji sezingubo kusetshenziswa i-dresser yamakhabethe angu-4 okwabelwana ngayo nezingwegwe zodonga. Kuvuleleka umnyango wendlu yokugezela esanda kulungiswa enamathayela phansi nezindonga eziphuzi libalele. Usinki/ize leze elinobuso obuqinile linesibuko esikhulu, esikhanyiswe kahle futhi kuneshawa eyodwa. Umnyango wesibili endlini yokugezela uvula ephasijini elifushane lapho uzothola khona amashalofu okugcina ajulile.
Igumbi lokuhlala lasekhaya linetafula lekhofi elikhulu, izihlalo ezi-2 ezigcwele ngokuchichimayo, nendawo yokulala kasofa yosayizi wendlovukazi. I-alcove yokudlela ihlinzeka nge-ambiance eclectic enezindonga zokhuni, izihlalo ezine etafuleni leqabunga, kanye nokukhanyisa ngesibani esilenga ingilazi enemibala ka-Tiffany. I-snack bar enezihlalo ezimbili inikeza indawo yokudlela eyengeziwe. Amakhabethe ayisisekelo e-rustic ekhishi lesitephusi, eliwuhlobo lwe-galley ahlanzwa ngomthunzi oqabulayo wechibi-oluhlaza okwesibhakabhaka, futhi agqitshwe nge-bamboo countertop eyingqayizivele. Ukulungiselela ukudla kuwumoya ohelezayo onesitofu esishisayo esingu-4, ihhavini elikhulu letoaster, nohhavini wemicrowave. Isiqandisi/isiqandisi esinosayizi omaphakathi sigcwalisa ikhishi, elihlome ngokuphelele ngezitsha nezinto zokupheka. Le ndlu ye-rustic ayinayo i-TV futhi isevisi yeselula ingase ibe nomkhawulo.
Ufuna ukuletha isilwane sakho nawe eholidini? Singathanda kuwe kule ndawo evumelana nezilwane ezifuywayo (izindleko zezilwane ezifuywayo ziyasebenza, okunye okukhishiwe kuyasebenza). Kuzoba ngu-$15 ubusuku ngabunye inkokhelo yesilwane ngasinye. Izakhiwo eziningana zinomkhawulo enanini nohlobo lwezilwane ezifuywayo. Sicela ubuze nganoma yiziphi izilwane ezifuywayo ngaphandle kwezinja nanoma iyiphi inombolo engaphezu kwezi-2 ezifuywayo. Izilwane ezifuywayo azivunyelwe ngaphandle kwenkokhelo efanele yesilwane esifuywayo kanye nokugunyazwa okufanele. Isivumelwano sakho sokuqasha sizobonisa ukuthi azikho izilwane ezifuywayo ezivunyelwe uma ungazange ukhokhe imali yesilwane esifuywayo, ngisho noma ube neyunithi evumelana nezilwane ezifuywayo. Kuzodingeka sibe nekhadi lesikweletu efayelini nganoma yikuphi ukubhukha ngesilwane esifuywayo. Uma inkokhelo yesilwane esifuywayo ingabonakali ezindlekweni lapho usuphuma, sicela uqaphele ukuthi ithimba lethu lokubhuka lizongeza lezo zindleko ($15/ubusuku/isilwane esifuywayo) ekubhukheni ngaphambi kokuthi ukhokhiswe. Ekufakeni kuhlu noma ukukhuluma ngesilwane esifuywayo endaweni oyibhukile, ugunyaza abakwaMowabi Lodging Vacation Rentals ukuthi bakhokhise le mali.
Ukukhansela kuzoholela enkokhelweni yokukhansela engu-$45 ubuncane. Ukukhansela phakathi nezinsuku eziyi-14 zokufika kukhokha imali efika ku-50% yokukhansela, futhi ukukhansela phakathi nezinsuku ezi-2 zokufika kuthwala imali efika ku-100% yokukhansela.
Intengo yendawo oqashe kuyo iholide inqunywa ezintweni eziningi, okuhlanganisa ubude bokuhlala nosayizi wephathi. Sicela uqiniseke ukuthi uthumela usayizi wephathi onembile ukuze sikwazi ukukhiqiza isilinganiso esilungile, futhi ukuze siqiniseke ukuthi utholakala ngokufanele ngesikhathi sokuhlala kwakho. Uzodinga ukuqhubeka uye endaweni yokubhukha, futhi ufake usayizi wephathi yakho, ukuze uthole ikhotheshini enembile.